अञ्जना हत्याकाण्डले अनुसन्धान अधिकारीलाई नै चकित बनाएपछि… [नालीबेलीसहित] – Jaljala Online
अञ्जना हत्याकाण्डले अनुसन्धान अधिकारीलाई नै चकित बनाएपछि… [नालीबेलीसहित]
Posted on May 15, 2019 May 15, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
जेठ १, काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी वृत्त, चापागाउँका प्रमुख राजकुमार खिउजुले प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको दुई दशक नाघिसक्यो ।
यो खबर गौरव पोखरेलले अनलाइनखबरमा लेखेका छन । तर, जेठाजुद्वारा बुहारीको हत्या गरिएको घटनाले उनलाई चकित बनाएको छ । ‘जागिर खाएको यत्रो वर्ष भइसक्यो । यस्तो विभत्स घटना देखेको थिइन’, डीएसपी खिउजु भन्छन् ।
ढोलाहिटी चोकबाट एक सय मिटर पर रहेको घरमा त्यो दिन आमा पुष्पा, बुहारी अञ्जना र जेठाजु उज्वल मात्रै थिए । बुबा कमलबहादुर र अञ्जनाका पति प्रज्वल विहानै काममा निस्किएका थिए ।
दिउँसो करिब साढे दुई बजेतिर उज्वल दौडिँदै आमा भएतिर आए । छोरा हल्ला गर्दै आएपछि तल्लो तलामा सुतेकी उनी ब्युझिइन् । ‘पुलिस बोलाइदिनू…’, परैबाट पुष्पाले आवाज सुनिन् । उनले छोराको कुरा बुझिनन् ।
ससुराले मृत्युको खबर पत्याउन सकेनन्
तर, सुरुमा उनले पत्याउनै सकेनन् । भन्छन्, ‘सुरुमा छिटो आउ भन्दा मलाई विश्वासै लागेन । काममा छु, अहिले किन आउनु भनेको थिएँ ।’
जब अरुले पनि फोन गर्न थाले, तब उनी त्यो अकल्पनीय घटना विश्वास गर्न बाध्य भए । उनी घर पुग्दा भने धेरै ढिला भइसकेको थियो । प्रहरीले बुहारीको शव उठाइसकेको थियो भने जेठो छोरा उज्वल प्रहरी नियन्त्रणमा पुगिसकेका थिए ।
हालसम्मको प्रहरी अनुसन्धानले उनको हत्याको कारण खुलाउन सकेको छैन । तर, उनको पृष्ठभूमितिर फर्किँदा उनी डिप्रेसनको शिकार भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
बुहारी हत्या आरोपमा पक्राउ परेका उज्वल म्यूजिसियन हुन् । उनले चर्चित गीत ‘सुन साइली…’, ‘छक्का पञ्जा २’, ‘काले दाइ.. काले दाइ..’ लगायतमा कला देखाएका थिए । तिहारपछि भने उनले जागिर छाडेका थिए ।
के उज्वलले बुहारीको विभत्स हत्या गर्नुको कारण डिप्रेसन नै हो, वा अरु केही ? यो विषय भने प्रहरीको अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै खुल्नेछ ।
अहिले उनीविरुद्ध ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरेर बयान लिने काम भइरहेको छ ।
अञ्जनाको माइती पक्ष भने हत्यामा जेठाजु मात्र संलग्न रहेको स्वीकार्दैन । छोरीको मृत्युको खबर सुनेर हेटौंडाबाट आएका बुबा गणेश लामा भन्छन्, ‘यस्तो अमानवीय तरिकाले हत्या भएको छ । यसमा एक जनाको मात्र संलग्नता हुनै सक्दैन ।’
अन्तरजातीय विवाहका कारण घटना भएको हुनसक्ने भन्दै छानविन गर्नुपर्ने माइती पक्षको माग छ । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पागलले मार्‍यो भनेर अपराधीलाई बचाउने खेल भइरहेको छ, तर ऊ पागल होइन । अपराधीलाई बचाउने काम नहोस् ।’
महतका छिमेकी भने दाजु-भाइ र उनीहरुका श्रीमतीबीच कहिल्यै झगडा नदेखिएको बताउँछन् । ‘यो परिवारको यति राम्रो सम्बन्ध थियो कि सबैले उदाहरणीय मान्थे’, एक छिमेकीले भने, ‘एक्कासि यस्तो घटना बाहिर आउँदा पत्याउनै गाह्रो भइरहेको छ ।’
चापागाउँ वृत्तका डीएसपी खिउजु भने उज्वलले सामान्य व्यक्ति सरह व्यवहार गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘उनले हत्या स्वीकारेका छन्’, खिउजुले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हतियारसहित उनी रंगेहात समातिएका हुन् । त्यसैले उनले हत्या गरेको होइन भन्ने कुरै आउँदैन ।’
यद्यपि, घटनामा अन्य कसैको संलग्नता खुले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिने उनले बताए ।
Posted on June 10, 2019 Author Jaljala Online
जेठ २७, चितवन । चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बारमा डोजर लगाएर भत्काएको अभियोगमा पक्राउ परेका मुख्य आरोपी प्रकाश कँडेलसहित ४ जना रिहा भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आइतबार साँझ डोजर प्रकरणका मुख्य आरोपी मानिएका कँडेलसहित, भैरव बास्ताकोटी, सुरेन्द्र बि.क. र धुव्र चापागाईंलाई रिहा गरेको हो। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल, प्रदेशसभा […]
दाङमा बालकको उपचारका क्रममा निधन भएपछि…..
जेठ ७, दाङ । डेढ वर्षीय बालकको उपचारका क्रममा मुत्यु भएपछि दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नं १ जेठानगाउँमा रहेको यूनिक मेडिकल सञ्चालक चेतराम चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । अर्घाखाँची सितगंगा नगरपालिका घर भई सोहि गाउँ माइतीको घरमा आएकी सरिता कुमालकी १८ महिने छोरा सुशान्तको लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो […]
काठमाडौँ । सरकारलाई सूचना (सुराकी) दिए १० लाख सम्म पुरस्कार पाइने कुरा तपाईंलाई थाहा छ ? हो, सरकारलाई सूचना दिएकै भरमा तपाईंले १० लाख रुपैयाँसम्म पाउन सक्नुहुन्छ । यो खबर एलिजा उप्रेतीले रातोपाटीमा लेखेकी छन् । कुनैपनि वस्तु चोरी पैठारी भएको छ भने सोको सूचना सरकारलाई दिनुहोस् र १० लाखसम्म पाउनुहोस् । यस्ता खालका सूचनामा […]
वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको पीडा: मालिकले श्रीमती र छोरीकै अघि राखेर शारीरिक शोषण गरे…
७ बर्षीय वालिका बलात्कारका आरोपित पक्राउ प्रकरण: तीन सेकेण्डमा काटिएको थियो फोन